Zaw Min Right Saya Kyaw
Maung Maung Ko ဘယ် လို လူ စု လူ စား တွေ ရဲ့ ခေါင်း ဆောင် လည်း…..
ဆေး လိပ် ခုံ က ခလေးမ တွေ တွံ တေး သိန်း တန် ကြိုက် ကြ တယ်
ကော လိပ် ကျောင်း သူ တွေ က ဝင်း ဦး ကို ကြိုက် တယ်…
ဝီ ရ သူ နောက် လိုက် နဲ့..ဥဦး ထွန်း လွင် ပ ရိတ် သတ် နဲ့ လည်း ကွဲ ပြား ပါ တယ်..
သဗလိဂ် ဂျမအတ် နဲ့..ဒါရ် ဂါ သမား အုပ် စု နဲ့…၅၉ လမ်း နဲ့….
အင်း….ခေါင်း ဆောင် တူ မယ် မ ထင် ဘူး ဗျ…ပရိတ်သတ် ခေါ် နောက် လိုက်…တွေ ရဲ့ အ တွေး အ မြင် ..ဟ…နေ တယ်
Aye Ko Ko Winn Great post…
Sai Mya Arkar အရင်ခောတ်ကြောင့်သာ ဦးရာဇတ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာ၊၊
Maung Maung Skw ဘာသာရေးနဲ့…နိုင်ငံရေးအလုပ်တွေကို…ခွဲကိုခွဲထားသင့်ပါတယ်…. ဒါမှအလုပ် လုပ်လို့ရမှာပေါ့
အခုဟာက ခွဲလိုက်ရင် င်ါအဖွဲ့ရဲ့(ငါ့ရဲ့) အရေးပါမှု လျော့ကျ သွားမလား နေရာပျောက်သွားမလားလို့ စိုးရိမ်တဲ့သူ တွေက နိုင်ငံရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ သီးသန့် ပေါ်ထွက်လာမှာကို အားမပေးကြဘူး အားမပေးချင်ဘူး အားမပေးရဲကြဘူး လို့ကျွန်တော်.. မြင်ပါတယ်
အိုလမာအဖွဲ့ က ပုဂ္ဂိုလ်တွေက နိုင်ငံရေးနဲ့ အမျိုးသားရေးလုပ်ပါတယ်
တကယ်တက်တက်ကြွကြွ ခြောက်လုံးပြူး ခါးကြားထိုးပြီးလုပ်တာပါ
အိုလမာရုံးခန်းမှာ ဖွသဝါကိစ္စ မေးလို့ မရ ပြောလို့ မရ ငြင်းလို့ မရပါဘူး
ဖွသဝါကိစ္စ ဘာသာရေးကိစ္စ မှန်သမျှ ကျောင်းတွေက အာလင်မ်တွေကဘဲ ကိုင်တွယ် ဆုံးဖြတ်ပါတယ်…ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကျောင်းကိုသွားနိုင်ပါတယ်…
Ko Moe Kyaw ရိုတွေက သူတို့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက ဒီလိုပဲဟေ့ဆို အဲ့တိုင်းအသေခံပြီးရပ်တည်ကြတယ်.။ ဗမာပြည်သူအများစုက ဒေါ်စု ဒါဟေ့ ဆိုအကုန်က ဒါလိုက်ကြတယ်.။ ဟဲဟဲ ပြည်မက အပ္ပနားတွေကတော့ ဘယ်သူ ဘာဟေ့ ဆိုတာနဲ့ တို့ကဒါဟေ့ ဆိုတဲ့ ကန့်လန့် သံတွေကြားရမယ်.။ ဘယ်သူ့နောက်ကိုမှ အသာတကြည်ဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူးလို့ ကစမ်ကြိမ်ထားတယ်.။
Ko Moe Kyaw သေသွားတဲ့သူတွေကိုတော့ ကျေးဇူးရှင်တွေဆိုပြီး သတ်မှတ်ပေးကြပါတယ်.။ အထိမ်းအမှတ်ပွလြေးတွေတွေတော့ လုပ်ပေးလေ့ရှိကြပါတယ်.။အဲ့တာတော့ချစ်စရာ
Maung Maung Ko အ ပေါ် က Ko MoeKyaw ပြော သွား သ လို ရည် ညွှန်း တာ ပါ…နောက် လိုက် တွေ တ ညီ တ ညာ တည်း သ ဘော တူ မှ ခေါင်း ဆောင် ပေါ် ထွက် လာ မှာ
ဦး အေး လွင် ဆို့…နိုး နိုး နိုး
ဦး မြင့် သိန်း ဆို နိုး နိုး နိုး နိုး
ဘယ် မော် လ ဝီ…နိမ်း နိမ်း နိမ်း ဟဲ
ညာ မော် လ ဝီ….န ဟီး န ဟီး…
ကဲ…ဟို သူ ဌေး ရော….နိုး နိုး နိုး…
ဆို လို တာ က ပရိတ် သတ် က တန်း မ တူ ဘူး…
သုဒ္ဓ ကိန်း တွေ ထဲ….ဘုံ ဆ ခွဲ ကိန်း ရှာ သ လို ပါ…ကို ကျော် ဝင်း…
Maung Maung Ko သင်္ချာ နဲ့ ဘဲ ဆက် ပြော ရ ရင်…ညှိ ဖို့ တ နည်း ဘဲ ရှိ ပါ တယ်…အား လုံး ကို သုည နဲ့ စား ပါ….အား လုံး အင်ဖန်နတီ…အကောင် ကြီး
တွေ ဖြစ် ကုန် ကြ မှ…ညီ ကြ မဲ့ သ ဘော..
Ko Moe Kyaw အပြစ် ထိုင်ပြောတာ မဟုတ်ပါဦးမောင်. ။ အဖြစ်ကို တိုင်ပြောစရာလူမရှိတာကခက်နေတာပါဦးမောင်.။
အန်ကယ် ဆရာ Kyaw Win ရဲ့ status နဲ့ comment များဖတ်ပြီး ဘာကော်မန့်မှ မရေးရသေးခင်မှာ ..
အန်ကယ် July Yeyint ရဲ့ status ကို ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ဖတ်လိုက်ရတော့ …
feeling က ဆန့်ငင် – ဆန့်ငင် ဖြစ်သွားမိတယ်
Alexander Wolff ပို့စ်ရော ကွန်မန့်တွေပါ ဖတ်ပီး အတွေးမျိုးစုံ အမြင်မျိုးစုံ သိခွင့်ရပါတယ်
ဒီ status နဲ့ comment များဖတ်ပြီးချိန်မှာ …
လက်ရှိ တကဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို ဆင်ခြင် စဉ်းစားရင်း … စိတ်တကယ် လေသွားမိတယ်။
bro Ko Moe Kyaw ရဲ့ ကော်မန့် နဲ့ အန်ကယ် U Maung Maung Ko ရဲ့ ဖြည့်စွက် ရည်ညွှန်းတဲ့ ကော်မန့်တွေ ဖတ်ရချိန်မှာတော့ .. (မြန်မာ)မွတ်စ်လင်မ်ထုရဲ့ အခြေအနေကို တကယ်ကို စိတ်ပျက်မိတယ်။
ကျတော်တို့ကို အဲ့ဒီ့လို ကွဲပြားမှုတွေအတွက် အကောင်းဆုံး မီးမောင်းထိုးပြနေတဲ့ အာယသ်တော် အခိုင်အမာ ရှိပါရက်နဲ့ …..
*** ဘယ်ခေတ် – ဘယ်ကာလအထိ… အခုလို … (ကွဲကောင်းရင်း )
… မတူ ကွဲပြားမှုတွေထဲမှာ ပျော်ဝင်ရင်း…
… ရှေ့ဆက်နေကြအုံးမှာပါလိမ့် မွတ်စ်လင်မ်တို့ရေ ***
12 hrs · Edited · Unlike · 3
ရတနာ သက် အခု ပေးဆပ်နေတာက မျိုးဆက်တဆက်မကပေမဲ့ … ရောင်နီသမ်းဖို့ကတော့ ဝေးနေစဲမို့ စိတ်ပျက်မိတာတော့ အမှန်ပဲ အန်ကယ် July ရေ …
Pathi Zaw Min Tun ပိုစ့်တင်တဲ့ တရက် နှစ်ရက်လောက်လေး အားကောင်းမောင်းသန်ဆွေးနွေးကြ တိုင်ပင်ကြ နောက်ရက်တွေကြ ဒုံရင်းဆိုရင်တော့ဖြင့်
Ko Moe Kyaw ရတနာသက်ရေ့..။ အဲ့ဒီအာယသ်ကိုကိုင်ကိုင်ပြီး ကြိုးဆိုတာဘယ်ဟာကိုဆိုလိုတာပါလို့ကွဲပြားကြရင်းထချနေကြတာတွေမတွေ့ဖူးဘူးလား
Maung Maung Skw ဒီပိုစ့်မှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဘယ်နှယောက် ဖတ်သူဘယ်နှယောက် ကြိုက်သူ ဘယ်နှယောက်လောက်များ ရှိမယ်ထင် လို့လဲ
ဒါ ဟိုအုပ်စုကရေးတာဆိုပြီး ဥပက္ခာပြုလိုက်တဲ့ အရေအတွက်က ပိုများပါ လိမ့်မယ်။
ဟိုအုပ်စု ဆိုတာဘဲ သိကြမှာပါ။
This entry was posted on April 30, 2015 at 5:57 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.